Attack Archives - Xinhua News Agency
မလိက (Malika) နှင့် ဆူမာယာ (Sumaya)တို့သည် အသက်နှစ်နှစ်အရွယ် အာဖဂန်ကလေးငယ်လေးများဖြစ်ကြသည်။ “အကြမ်းဖက်ဟု သံသယရှိသူများ” ကို ပစ်မှတ်ထားသော အမေရိကန်၏ မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၄င်းတို့နှစ်ဦးနှင့်အတူ မိသားစုဝင် ရှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့က ကဘူးလ်မြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဆိုပါ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကလေးခုနှစ်ဦးပါဝင်သော မိသားစုဝင်၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ — CNN
(English Version) Malika and Sumaya were two-year-old Afghan girls. A U.S. drone strike targeting “suspected terrorists” killed them both along with eight family members. Ten members...